Ukukhanya kweTshayina okungqonge, okungaphantsi komgangatho kunye noyilo loyilo lomenzi we-LED-uEurborn
Isibane eseludongeni ML1021
Indawo yokukhanya kwe-PL021
Indawo yokukhanya kwe-PL023
Indawo yokukhanya kwe-PL026
Indawo yokukhanya kwe-PL608
Ividiyo yokuFakelwa kumhlaba wokukhanya kwe-LED
Umgangatho ophezulu kunye nomgangatho ophezulu.
I-Eurborn kuphela komenzi waseTshayina ozinikele kuphando, uphuhliso kunye nemveliso yentsimbi engaphandle engaphantsi komhlaba kunye nokukhanya kwamanzi. Ngokungafaniyo nabanye abathengisi abenza iintlobo ezininzi zezibane, kufuneka sihlale sigxile kwindawo enzima ecela umngeni kwimveliso yethu. Imveliso yethu kufuneka ikwazi ukuthatha le miqathango kwaye isebenze ngokugqibeleleyo ngaphandle komceli mngeni. Ke kufuneka senze yonke imizamo kwinqanaba ngalinye ukuze siqiniseke ukuba imveliso yethu iya kuyenza ukoneliseka
I-Eurborn ineziqinisekiso ezifanelekileyo ezifana ne-IP, i-CE, i-ROHS, i-patent yokubonakala kunye ne-ISO, njl.
Isatifikethi se-IP: Umbutho woKhuseleko lweZibane weHlabathi (i-IP) uhlela izibane ngokwenkqubo yazo yokufaka iikhowudi kwi-IP yokungabinalo uthuli, umba wangaphandle oqinileyo kunye nokungena kwamanzi. Umzekelo, i-Eurborn ikakhulu ivelisa iimveliso zangaphandle ezinje ngokungcwatywa kunye nezibane zasemhlabeni, izibane eziphantsi kwamanzi. Zonke izibane zangaphandle zensimbi ezingenasici zihlangabezana ne-IP68, kwaye zinokusetyenziselwa ukusetyenziswa okungaphakathi okanye ukusetyenziswa kwamanzi. Isatifikethi se-EU CE: Iimveliso aziyi kusongela iimfuno ezisisiseko zokhuselo lokhuseleko lomntu, lwezilwanyana kunye nemveliso. Imveliso yethu nganye ineziqinisekiso ze-CE. Isatifikethi se-ROHS: Ngumgangatho onyanzelekileyo osekwe ngumthetho we-EU. Igama elipheleleyo "nguMyalelo wokuThintela ukuSetyenziswa kweziNongo ezithile ezinobungozi kwizixhobo zombane neze-elektroniki". Isetyenziswa ikakhulu ekumiseni izinto kunye nakwimigangatho yenkqubo yeemveliso zombane neze-elektroniki. Iluncedo ngakumbi kwimpilo yabantu kunye nokukhuselwa kwendalo. Injongo yalo mgangatho kukususa ilothe, i-mercury, i-cadmium, i-hexavalent chromium, i-polybrominated biphenyls kunye ne-polybrominated diphenyl ethers kwiimveliso zombane neze-elektroniki. Ukuze sikhusele ngcono amalungelo kunye neemfuno zeemveliso zethu, sinesethu isiqinisekiso sokubonakala kwelungelo elilodwa lomenzi weemveliso ezininzi eziqhelekileyo. Isatifikethi se-ISO: Uchungechunge lwe-ISO 9000 lolona mgangatho udumileyo phakathi kwemigangatho emininzi yamanye amazwe esekwe yi-ISO (Umbutho waMazwe ngaMazwe wokuBekwa emgangathweni). Lo mgangatho ayikokuvavanya umgangatho wemveliso, kodwa kuvavanya ulawulo lomgangatho wemveliso kwinkqubo yemveliso. Umgangatho wolawulo lombutho.